OTU ESI EMEPỤTA NA PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Otu esi emepụta na Photoshop
Onye ọ bụla n'oge ọ na-agbapụ mgbe ọ bụla ọ na-eche ihu. Nke a na-eme mgbe ị na-agbanye aka gị, na-ese foto mgbe ị na-agagharị, ma nwee ogologo oge. Site n'enyemaka nke Photoshop, ị nwere ike iwepụ ntụpọ a.
Okpueze zuru oke na-agbalị ịnata ọ bụghị nanị nmalite. Ọbụna ọkachamara ahụmahụ n'ọhịa ha na ọnụnọ nke ngwá ọrụ pụrụ iche na-agbalị ilekwasị anya, nyochaa ikpughe na photosensitivity.
Tupu ewepụtara foto ahụ ka ebipụta ya, a na-edozi okpokoro ndị ahụ na nchịkọta akụkọ iji wepụ ihe ntụpọ anya dị.
Taa, anyị ga-atụle otú ị ga-esi wepụ foto ahụ na Photoshop ma mee ka foto ahụ dị nkọ.
• mgbazi agba;
• ngbanwe mgbanwe;
• Ịkekọrịta na Photoshop;
• Nhazi mgbanwe foto.
Ntụziaka maka ịmepụta nsogbu dị mfe: ọ ka mma ịghara ịgbanwe ogo na nha oyiyi, mana ị ga-arụ ọrụ na nkọ.
Nkpu a na-ekpochapughi - ụzọ dị mfe iji mụta ihe
N'ihe banyere edo edo, ọ bụghị nke a ma ama, jiri ngwá ọrụ ahụ "Ekekọrịta Mgbasa". E mere ya iji dozie nkọcha ma dị na taabụ ahụ "Nzacha" ọzọ "Nkọwapụta" ma chọọ ebe nhọrọ a chọrọ.
Ịhọrọ nhọrọ achọrọ, ị ga-ahụ ọnyà atọ: Mmetụta, Radius na Isohelium. Uru nke kachasị mma na ikpe gị ga-ahọrọ site na nhọrọ aka. Maka onyinyo ọ bụla nwere àgwà dị iche iche dị iche, njirimara ndị a dị iche na ịnweghị ike ime ya na akpaghị aka.
Mmetụta ọrụ maka ike nzacha. Site na ịmegharị ihe mmịfe ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ na nnukwu ụkpụrụ na-eme ka ọka, ụda, na nkwụsịtụ kachasị dịka ọhụụ.
Radius na-ahụ maka njedebe nke etiti etiti. Dika okirikiri na-adalata, nkọ na-ebelata, mana ezi ihe bu ezi ihe.
A ghaghị idozi ike na radius. Gbanwee ụkpụrụ ndị kachasị elu, ma tụlee ụda ahụ. Ha ga-adị ike.
Isogelium gosipụtara mmebi site na agba agba maka ebe nwere ọdịiche dị iche.
Ọnụ ọgụgụ ogo foto ga-abawanye mma. Nhọrọ a na-ewepu mkpọtụ dị, ọka. Ya mere, a na-atụ aro ka ị rụọ ya n'ikpeazụ.
Ụdị Ejikere Nhọrọ
Enwere nhọrọ na Photoshop "Ụdị Njiri"onye na-ahụ maka ịba mma nke ọma.
Echefula banyere ala. Site n'enyemaka ha ọ bụghị nanị ntụpọ nke foto ka a kpochara. Ha na-enye gị ohere ịmepụta nke ọma na àgwà nke ihe ahụ. Usoro nke omume bụ:
1. Mepee onyinyo ahụ ma detuo ya na nchekwa ọhụrụ (menu "Eke - Duplicate Layer", agbanwela ihe ọ bụla na ntọala).
2. Lelee na panel ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na oyi akwa ahụ. Họrọ akara ebe edepụtara aha nke akara ngosi e kere eke na ihe a ga-edegharị.
3. Mee usoro nke omume. "Ntancha - Ndị ọzọ - Ụdị Nkọwa", nke ga-enye map nke ọdịiche.
4. N'ebe mepere emepe, tinye nọmba nke ụdaolu nke ebe ị na-arụ ọrụ. A na-achọkarị uru dị n'ime ihe na-erughị 10 pikselụ.
5. Foto nwere ike ịnwe nchapu, mkpọtụ, n'ihi akụkụ anya nke ngwaọrụ. Iji mee nke a, họrọ na Nzacha "Nzuzo - Uzu na nchapu".
6. N'ọzọ na-esote, chọpụta ihe eji eme akwa. Ọ bụrụ na emeghị nke a, mgbe ahụ, ụda mkpọtụ nwere ike ịpụta n'oge usoro mgbazi. Họrọ "Image - Correction - Discolor".
7. Mgbe ị kwusịrị ọrụ na oyi akwa, họrọ na menu ndokwa "Ngwakọta na ọnọdụ" ọchịchị "Gbanye".
Enwere otutu uzo iji mezuo ihe. Gbalịa, cheta ụzọ ndị foto gị ga-esi dị ukwuu.